स्वास्थ्य खबर – Bihani Post
December 29, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on जाडोमा ओठ र गाला फुटे यसरी गर्नुस् घरमै औषधि…
जाडो बढेसँगै छाला सुक्खा हुनु, ओठ र गाला फुट्नु सामान्य हो । यो मौसममा यस्ता समस्या प्रायःलाई हुने गर्छ। छाला सुक्खा हुने समस्या हटाउन खासै केही गर्नुपर्दैन। आफ्नै घरमै भएका दैनिक उपभोग्य सामग्रीबाट यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छरु। केवल जाँगर देखाउनु अत्यावश्यक छ। आयुर्वेदका अनुसार, जाडो याममा शरीरमा वायु बढ्ने गरेकाले …
December 4, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on किन फरक हुन्छन त नर्मल र अपरेशनबाट जन्मेका बच्चा ? यस्ता छन् कारण
आमाको पेटबाट बाहिर आउने बित्तिकै बच्चाले माहौलसँग लड्न सुरु गर्दछ । बच्चाको जन्मका बेला आमाको योनी वा भजाइनाबाट तरल पदार्थ निस्कन्छ । जसमा यस्तो ब्याक्टेरिया हुन्छ, जसले बच्चामा रोगहरुसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । तर जुन बच्चा अपरेशन को माध्यमबाट पेटबाट निकालिन्छ, उनीहरुमा आमाबाट यो क्षमता हासिल हुँदैन । त्यसो भए …
November 22, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on चिसो मौसममा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ? एक पटक पुरा पढ्नुस
जाडोयामको सुरुवातसँग चिसो बढ्दै छ । चिसोको कारण हामीलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन्छ । त्यसमध्ये छाला सुख्खा हुने समस्या पनि एक हो । चिसो मौसमका हावा एकदमै चिसो हुने गर्छ र, चिसो हावाका कारण छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ । यो आम समस्या हो । चिसोमा छाला सुख्खा हुनुमा …
November 4, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on पसिना गन्हाउने समस्या छ ?त्यसो भय यस्तो छ समाधानको उपाय
चियाका किसिममा हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै रुची हुन्छन्। कसैले दूध राखेको चिया पिउन रुचाउँछन् भने कतिपयले कालो चिया। तर बिहान खाली पेटमा दूध राखेको चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ। यद्यपी कालो चिया पिउँदा स्वास्थ्यको लागि पनि विभिन्न किसिमका फाइदाहरु हुने गर्दछन्। बिहान हर घरमा पाक्ने चिया मध्ये कालो चियाको बारेमा …
सावधान !!! ‘पैसाको लागि डाक्टरले नै मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन्’ -डा. मनबहादुर
October 30, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on सावधान !!! ‘पैसाको लागि डाक्टरले नै मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन्’ -डा. मनबहादुर
हाम्रो मुटु कुनै स्वचालित यन्त्र झैं हरक्षण चलीरहेको हुन्छ, जसलाई हामी ढुकढुकी या धड्कन भन्छौं । मुटुको यही सन्तुलित चालकै कारण शरीरका हरेक कोषसम्म रगतसँगै अक्सिजन र ग्लुकोज प्रवाह हुन्छ र हाम्रो जीवन चल्छ । कहिलेकाँही मुटुको यही चालमा गडबडी उत्पन्न हुन्छ । मुटुको चालमा गडबडी भएमा राम्रोसँग विद्युतीय तरंग …
दाद को लागि औसधि नरिबल यसरि प्रयोग गर्नुस , नया तथा पुराना दाद सजिलै निको हुन्छ
October 28, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on दाद को लागि औसधि नरिबल यसरि प्रयोग गर्नुस , नया तथा पुराना दाद सजिलै निको हुन्छ
एजेन्सी । मानिसका शरीरका विभिन्न भाग, हात, पाखुरा, गर्दन, घाँटी वा अन्य भागमा चिलाएर रातै खटिरा आउने वा खटिरा पाकेर दाग बस्ने जस्ता समस्या आयो भने हामी यसलाई दाद भनिन्छ। शरीर चिलाएर रातो खटिरा आउने र निको भए पनि यसको दाग कहिल्यै हटेर नजाने समस्या एक आम समस्या हो । …
पिसाब किन पोल्छ ? किन बारम्बार पिसाब लाग्छ ? पिसाब गरिसकेपछि पनि किन ननिख्रेको महसुस हुन्छ ? डा. त्रिपाठीको सुझाव
October 8, 2018	भिडियो, स्वास्थ्य खबर Comments Off on पिसाब किन पोल्छ ? किन बारम्बार पिसाब लाग्छ ? पिसाब गरिसकेपछि पनि किन ननिख्रेको महसुस हुन्छ ? डा. त्रिपाठीको सुझाव
आम नेपालीका प्रमुख स्वास्थ्य समस्या मध्ये पिसाब सम्बन्धी समस्या पनि एक महत्वपुर्ण समस्या हो। बारम्बार पिसाब लागीरहने, पिसाब गरीसकेपछी पनि पुरै पिसाब नभएको जस्तो महशुस हुने, पिसाब पोल्ने, थोरै थोरै पिसाब बारम्बार भैरहने, कोखो दुख्ने लगायतका कयौं लक्षणहरु पिसाब सम्बन्धी रोगका लक्षणहरु हुन्। यस्ता समस्या किन हुन्छन र यसबाट कसरी …
अनुहार सफा र चमत्कारी बनाउन ब्युटी पार्लर जानै नपर्ने, राति सुत्न भन्दा २ मिनेट अगाडी अनुहारमा यो लगाउनुस – (भिडियो हेर्नुस)
October 1, 2018	भिडियो, स्वास्थ्य खबर Comments Off on अनुहार सफा र चमत्कारी बनाउन ब्युटी पार्लर जानै नपर्ने, राति सुत्न भन्दा २ मिनेट अगाडी अनुहारमा यो लगाउनुस – (भिडियो हेर्नुस)
राति सुत्न भन्दा २ मिनेट अगाडी अनुहारमा यो लगाउने गर्नुस बिहान उठ्दा तपाई चकित हुनुहुनेछ (भिडियो हेर्नुस) हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर ,,गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा …
घ्यू कुमारीको चमत्कारी फाइदाहरु, साना स्तनलाई बढाएर बनाउँछ आर्कषक ! जानी राखौ
September 22, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on घ्यू कुमारीको चमत्कारी फाइदाहरु, साना स्तनलाई बढाएर बनाउँछ आर्कषक ! जानी राखौ
काठमाडौँ। घ्यू कुमारी छालासम्बन्धी भएका विभिन्न समस्याहरु समाधानको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । घ्यु कुमारीको पातमा फाइटोइसट्रोजन पाइने भएकाले यसले शरिरमा भएको एसट्रोजनको मात्रालाई बढाएर स्तन बढाउनमा सहयोग गर्दछ । प्राकृतिक रुपमा घ्यू कुमारीको अत्याधिक फाइदाहरु रहेका छन् । यसले रक्तसञ्चारमा सुधार ल्याएर छालामा भएको घाउचोटलाई तुरुन्तै निको पार्छ । …
बिषालु सर्पाले टोक्यो?अब चिन्ता नलिनुहोस पुदिनाले एकै सेकेन्डमा बिष निकाल्छ -बाकि कस्तो कस्तो रोग चेट पर्छ?पढ्नुहोस.
September 14, 2018	स्वास्थ्य खबर Comments Off on बिषालु सर्पाले टोक्यो?अब चिन्ता नलिनुहोस पुदिनाले एकै सेकेन्डमा बिष निकाल्छ -बाकि कस्तो कस्तो रोग चेट पर्छ?पढ्नुहोस.
बहुगुण भएको बनस्पति हो पुदिना । पुदिनाको विषयमा धेरैले चासो लिन थालेका छन् । यसले धेरै रोगबाट हामीलाई बचाउछ । यसलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नुको साथै यसलाई हामी अचारबानाएर पनि खाने गर्छौ । केहीलाई यसको स्वाद मन पर्ला त केहीलाई मन नपर्ला पनि । तर यसको गुण तपाईले थाहा पाउनु …